जीसस असेन्शन रिटर्न, विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
स्वर्गारोहण र ख्रीष्टको फिर्ती
प्रेरित १: In मा हामीलाई भनिएको छ: "अनि जब उनले यसो भने, उनी झट्टै उठाइए र बादलले उनलाई तिनीहरूको आँखाको अगाडि लगे।" उठ्ने प्रश्न सरल छ: किन?
येशू किन यसरी स्वर्गमा उक्लनुभयो?
यस प्रश्नमा फर्कनु अघि हामी निम्न तीन पदहरूमा फर्केर हेरौं: अनि जब तिनीहरू हराइरहेका मुक्तिदातालाई हेरिरहेका थिए, तब सेतो लुगा लगाएका दुईजना मानिसहरू उनीहरूको छेउमा देखा परे: "गालीलका मानिस हो," उनीहरूले भने, "तिमी के गर्दैछौ? र आकाश हेर्नु? यो येशू जसलाई स्वर्गमा लगिएको थियो उहाँ फर्केर आउँनुहुनेछ जुन तपाईंले उहाँलाई स्वर्गमा जानु भएको देख्नु भयो। त्यसपछि तिनीहरू जैतून डाँडा भनिने डाँडाबाट यरूशलेम फर्के, जसलाई विश्रामको दिनको टाढाबाट यरूशलेमको नजिक छ ”। (V. 10-12)
यस खण्डमा दुई आधारभूत बुँदाहरू छन् - येशू स्वर्ग जानुहुन्छ र उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। दुबै बुँदाहरू इसाई विश्‍वासमा ठूलो महत्त्वका छन् र ती दुबै प्रेरितहरूको पनि हो। सबैभन्दा पहिला, येशू स्वर्गमा उक्लनुभयो। यस सन्दर्भमा, ख्रीष्टको स्वर्गलाई सामान्यतया उल्लेख गरिएको छ, छुट्टी जुन हरेक बिहिवार इस्टर पछि Thursday० दिन पछि मनाइन्छ।
यस खण्डले येशू फर्कनुहुनेछ भनेर पनि औंल्याउँछ - ऊ स्वर्ग फर्किएको बाटोमा फर्किनेछ। मेरो धारणामा, यो अन्तिम बिन्दुले सबैको लागी स्वर्गमा जानुको कारणलाई औंल्याउँछ - यस प्रकार यो जोड दिइयो कि उहाँ सबैका लागि समान रूपमा देखिने गरी आउनुहुनेछ।
आफ्ना बुबालाई फर्केर पृथ्वीमा एक दिन फर्केर आउनेछन् भनेर आफ्ना चेलाहरूलाई थाहा दिन यो सजिलो हुने थियो - उहाँ अन्य अवसरहरूमा जस्तै हराउनुहुनेथियो, तर यसपटक फेरि नदेखेसम्म। , मलाई यसको कुनै ईश्वरशास्त्रीय कारण थाहा छैन यसको दृश्यमा आकाशमा तैरिरहेको छ। उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई सन्देश पठाउन चाहानुहुन्थ्यो र तिनीहरू मार्फत हामी केही सन्देश पठाउन चाहनुहुन्थ्यो।
सबैको लागि देखिने दृश्य हराएर, येशूले यो स्पष्ट पार्नुभयो कि उहाँ यस पृथ्वीबाट एक्लै जानु हुँदैछ तर उहाँ आफ्नो बुबाको दाहिने हाततर्फ स्वर्गमा बस्नुहुनेछ र उहाँ अनन्त प्रधान पुजारीको रूपमा खडा हुनुहुनेछ। एक जना लेखकले भनेझैं येशू "स्वर्गमा हाम्रो मान्छे" हुनुहुन्छ। स्वर्गको राज्यमा हामीसँग कोही छ जसलाई हामी को हौं, जसले हाम्रा कमजोरीहरू र आवश्यकताहरू जान्दछ, किनकि उहाँ आफैं मानव हुनुहुन्छ। स्वर्गमा पनि उहाँ मानव र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जस्तो कि यो थियो।
उनको स्वर्गारोहण पछि पनि, धर्मशास्त्रले उनलाई एक व्यक्ति भन्छ। एरियोपागसमा एथेन्सवासीहरूलाई प्रचार गर्दा पावलले भने कि परमेश्वरले आफूले छानेको व्यक्ति मार्फत संसारको न्याय गर्नुहुनेछ र त्यो व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब उनले तिमोथीलाई लेखेका थिए, उनले उनीसंग येशू ख्रीष्टका बारेमा बोले। उहाँ अझै मानव हुनुहुन्छ र यस्तै शारीरिक रूपमा। उहाँ शारीरिक रूपमा मृतबाट बौरेर स्वर्ग जानुभयो। कुनले हामीलाई जहाँ शरीर वास्तवमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न गराउँछ? स्थानिक वा भौतिक सीमाहरूको अधीनमा नरहेका सर्वव्यापी ईश्वर एकै समय शारीरिक ठाउँमा कुनै खास ठाउँमा कसरी हुन सक्छ?
के येशूको शरीर अन्तरिक्षमा कतै तैरिरहेको छ? मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन कसरी येशू बन्द ढोकाबाट हिंड्न सक्नुहुन्छ वा गुरुत्वाकर्षणको कानूनको बिरूद्ध उठ्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट छ, भौतिक नियमहरू येशू ख्रीष्टमा लागू हुँदैन। यद्यपि यो अझै शरीरमा अवस्थित छ, यो सीमितताको अधीनमा छैन कि सामान्यतया कर्पोरेलिटीमा विचित्र हुन्छन्। त्यसले अझै पनि ख्रिष्टको शरीरको स्थानीय अस्तित्वको प्रश्नको उत्तर दिँदैन, तर यो हाम्रो मुख्य चिन्ता हुनु हुँदैन, हैन र?
हामीले थाहा पाउनुपर्दछ कि येशू स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर कहाँ हुनुहुन्न। हाम्रो निम्ति ख्रिष्टको आत्मिक शरीरको बारेमा थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ, वर्तमानमा चर्च समुदायमा येशू यस पृथ्वीमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ। र यो उहाँ पवित्र आत्मा मार्फत गर्नुहुन्छ।
आफ्नो शारीरिक पुनरुत्थान भएपछि, येशूले एक व्यक्ति र एक देवको रूपमा अस्तित्वमा रहनुहुनेछ भन्ने कुराको स्पष्ट चिन्ह दिनुभयो। यसबाट हामी जान्दछौं कि प्रधान पुजारीको रूपमा उनले हाम्रा कमजोरीहरू बुझ्दछन्, जस्तो कि हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। स्वर्गारोहण सबैले देख्ने गरी, एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ: येशू केवल हराउनुभएन - बरु हाम्रो प्रधान पुजारी, अधिवक्ता र मध्यस्थको रूपमा, उहाँ केवल आफ्नो आध्यात्मिक कार्यलाई अर्कै तरिकाले जारी राख्नुहुन्छ।
म येशू शारीरिक र सबैको लागि स्वर्ग जानुको अर्को कारण देख्छु। यूहन्ना १ 16,7..XNUMX ले भन्छ कि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई छोडेर जानु उत्तम हो। किनभने यदि म गइनँ भने, सान्त्वनादाता तपाईकहाँ आउँदैनन्। तर जब म जान्छु मँ उसलाई तपाईं कहाँ पठाउन चाहान्छु। "
मलाई पक्का छैन किन, तर स्पष्टतः येशूको आरोहण पेन्टेकोस्ट हुनु अघि नै थियो। जब येशू स्वर्गतिर उक्लनु भयो चेलाहरूले तिनीहरूलाई विश्वास गरे कि प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ।
त्यसकारण त्यहाँ कुनै दु: ख थिएन, कम्तिमा यस प्रकारको केहि पनि प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छैन। शारीरिक उपस्थित येशूसँग बिताएका राम्रा दिनहरू विगतको कुरा हो भन्ने तथ्यले कोही चिन्तित थिएनन्। विगतको समय सँगै पनि आदर्श थिएन। बरु, एक जनाले भविष्यमा खुशीसँग हेरे, जसले प्रतिज्ञा गरे कि अझ महत्वपूर्ण चीजहरू ल्याउनेछ, जसरी येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
यदि हामी प्रेरितहरूको प्रेरितहरूको अनुसरण गर्न जारी राख्छौं भने, हामी विश्वासका १२० भाइहरूको उत्साहको बारेमा पढ्नेछौं। तिनीहरू प्रार्थनाको लागि सँगै आएका थिए र अगाडिको योजनाको लागि। उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरूसँग गर्नुपर्ने एउटा काम थियो, र
यसैले उनीहरूले यहूदाको ठाउँ लिनलाई एक प्रेरित छान्छन्। नयाँ इस्राएलका प्रतिनिधित्व गर्न १२ प्रेरितहरू हुनुपर्दछ भनेर तिनीहरूलाई थाहा थियो, जुन जग परमेश्वरले बसाल्नुभएको थियो। उनीहरूले संयुक्त बैठकका लागि भेटेका थिए; किनभने त्यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने धेरै थियो।
येशूले तिनीहरूलाई आफ्नो साक्षीको रूपमा सारा संसारभरि जान निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो। उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू, येशूले आज्ञा गर्नुभए अनुसार प्रतिज्ञा गरिएको सान्त्वना प्राप्त गर्नेलाई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान गर्न यरूशलेममा पर्खनु पर्ने थियो।
तसर्थ, येशू स्वर्गारोहण भनेको नाटकीय ड्रम रोलजस्तै थियो, प्रेषितहरूले विश्वासको सेवामा उनीहरूको सेवाको बढ्दो महत्त्वको क्षेत्रहरू बनाउनुपर्नेछ भनेर प्रारम्भिक चिंगारीको प्रत्याशाको क्षण थियो। जसरी येशूले उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, पवित्र आत्माको आधारमा उनीहरूले परमेश्वर आफैले भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्दछ र येशू स्वर्गारोहण हुनुभएकोले सबैले देख्न सक्ने कुराले प्रतिज्ञा गरे कि अझ महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुनेछन्।
येशूले पवित्र आत्मालाई “अर्को सान्त्वनादाता” भन्नुभयो (यूहन्ना १:14,16:१); ग्रीकमा अब "अरु" का लागि दुई फरक सर्तहरू छन्। एक समान कुरा दर्शाउँछ, अर्को केहि फरक; स्पष्टतः येशूले पनि यस्तै केही कुरा भन्नुभएको थियो। पवित्र आत्मा येशू जस्तै छ। यसले केवल एक मात्र होइन, परमेश्वरको व्यक्तिगत उपस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्दछ
अलौकिक शक्ति। पवित्र आत्मा जीवित हुनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ; उसले निर्णय गर्छ। उहाँ एक व्यक्ति, एक ईश्वरीय व्यक्ति, र एक भगवान को भाग को रूप मा छ।
पवित्र आत्मा येशूसँग यस्तै छ कि हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि येशू हामीमा रहनुहुन्छ, चर्च समुदायमा बस्नुहुन्छ। येशूले भन्‍नुभयो कि उहाँ आउनुहुनेछ र विश्‍वासीहरूसँग रहनुहुनेछ - तिनीहरूमा अन्तर्निहित - र उहाँ पवित्र आत्माको रूपमा त्यसो गर्नुहुनेछ। यसैले येशू जानुभयो, तर हामीलाई आफैंमा छोड्नुभएन, उहाँ पवित्र आत्माबाट हामीमा फर्कनुभयो।
तर ऊ सबैको लागि शारीरिक र दृश्यात्मक रूपमा फर्कनेछ, र म विश्वास गर्दछु कि उही आकारमा उनको आरोहणको मुख्य कारण यही थियो। हामीले सोच्नु हुँदैन येशू पृथ्वीमा पहिले नै पवित्र आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यसैले पहिले नै फर्किसक्नुभएको छ, ताकि हामीसँग पहिलेदेखि नै केहि कुराको आशा गर्नु हुँदैन।
होइन, येशूले यो स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि उहाँको फिर्ती कुनै गोप्य कुरा होइन, अदृश्य हो। यो दिनको उज्यालो जत्तिकै स्पष्ट हुनेछ, सूर्यको उदाउँन जत्तिकै स्पष्ट हुनेछ। यो सबैको लागि दृश्यात्मक हुनेछ, जसरी उनको एसेन्सन डे लगभग २००० वर्ष अगाडि जैतुन डाँडामा सबैले देखेका थिए।
यसले हामीलाई आशा दिन्छ कि हामीसँग अहिले जे छ त्यो भन्दा बढि हामीले आशा गर्न सक्छौं। हामी हाल धेरै कमजोरीहरू देखिरहेका छौं। हामी हाम्रा कमजोरीहरू, हाम्रो चर्च र ईसाई जगतको पूर्ण रूपमा स्वीकार्छौं। हामी पक्कै पनि आशाको बन्धनमा छौं कि सबै चीजहरू अझ राम्रो हुँदै जान्छन् र ख्रीष्टले हामीलाई आश्वासन दिनुहुन्छ कि उसले परमेश्वरको राज्यलाई अभूतपूर्व अनुपातको गति दिन नाटकीय तरिकामा हस्तक्षेप गर्नेछ।
उसले चीजहरू त्यस्तै छोड्दैन। उहाँ फर्कनुहुनेछ जसरी आफ्ना चेलाहरूले उहाँलाई स्वर्गमा गायब भएको देखेका थिए - शारीरिक र सबैलाई दृश्यात्मक। बादलहरु: यसले एक बिषय पनि समेट्छ जुन म यति धेरै महत्त्व दिन सक्दिन। बाइबलले प्रतिज्ञा गरेको छ, जसरी उहाँ बादलबाट स्वर्गमा उक्लनुभयो, येशू फर्कनुहुनेछ, उहाँ बादलले बोक्नुभयो। मलाई थाहा छैन तिनीहरूका भित्र के गहिरो अर्थ छ - ती स्वर्गदूतहरू जो ख्रीष्टसँगै देखा पर्दछ भनेर चिन्ह लगाउँदछन्, तर तिनीहरू पनि आफ्नो मूल रूपमा देखिने छन्। यो कुरा निश्चित रूपमा कम महत्त्वपूर्ण छ।
अर्कोतर्फ, आफैं ख्रीष्टको नाटकीय फिर्ती केन्द्रीय महत्त्वको छ।यसको साथ प्रकाशको प्रकाश, बहिरो आवाज र सूर्य र चन्द्रमाको अभूतपूर्व घटनाहरू हुनेछन् र सबैले यसलाई देख्न सक्षम हुनेछन्। यो indubitable हुनेछ। कसैले पनि भन्न सक्नेछैन कि यो यो र त्यो स्थानमा भएको थियो। जब ख्रीष्ट फर्कनुहुनेछ, यो घटना जताततै महसुस गरिने छ र कसैले पनि यसलाई प्रश्न गर्दैन।
जब जब थिस्सलोनिकीहरूलाई लेखेको पहिलो पत्रमा पावलले व्याख्या गर्दछन्, हामी ख्रीष्टलाई संसारबाट टाढा वायुमा भेट्नेछौं। र्याप्चरको सम्बन्धमा एकले बोल्दछ, र यो गोप्य रूपमा हुनेछैन, बरु सबैलाई सार्वजनिक रूपमा हेर्नका लागि। सबैजनाले पृथ्वीमा ख्रीष्टको आगमनलाई अनुसरण गर्नेछन्। र यसैले हामी येशूका आरोहणका साथै उहाँको क्रूसमा गाड्न, गाड्न र पुनरुत्थानमा सहभागी हुन्छौं। हामी पनि स्वर्ग फर्कने प्रभुलाई भेट्न जान्छौं, र त्यसपछि हामी पृथ्वीमा फर्कनेछौं।
के यसले फरक पार्छ?
यद्यपि यो सबै कहिले हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। के यसले हाम्रो जीवनशैली सम्बन्धी केहि परिवर्तन गर्दछ? यो यस जस्तो हुनु पर्छ। कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्रमा र सेन्ट जोनलाई लेखेको पहिलो पत्रमा हामी व्यावहारिक व्याख्या पाउँछौं। त्यसकारण यसले १ यूहन्ना:: २-; मा यसो भन्छ: “प्रियहरू, हामी पहिलेदेखि नै परमेश्वरका सन्तानहरू हौं; तर हामी के हुनेछौं भनेर अझसम्म प्रकट गरिएको छैन। तर हामीलाई थाहा छ कि यदि यो स्पष्ट भयो भने हामी उहाँजस्तै हुनेछौं; किनकि हामी उहाँ जस्तै हुनुहुन्छौं। र जसरी उहाँमा त्यस्तो आशा छ, उहाँ आफैं शुद्ध हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ। "
अनि यूहन्नाले बताउँछन् कि विश्वासीहरू परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दछन्; हामी पापी जीवन बिताउन चाहँदैनौं। येशू आउनुहुनेछ र हामी उहाँजस्तै हुनेछौं भन्ने हाम्रो विश्वासको व्यावहारिक प्रभावहरू हुन्छन्। यसले हामीलाई हाम्रा पापहरू पछाडि छोड्ने प्रयास गर्दछ। यसको फलस्वरूप यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो प्रयासले हामीलाई बचाउनेछ वा हाम्रो दुराचारले हामीलाई बिगार्नेछ; बरु, यसको मतलब यो हो कि हामी पाप गर्न खोज्दैनौं।
हामी यसको दोस्रो बाइबलीय संस्करण १ कोरिन्थी १ 1 मा पुनरुत्थान अध्यायको अन्त्यमा पाउँछौं। ख्रीष्टको पुनरागमन र हाम्रो पुनरुत्थानको अमरत्वको विवरणमा पावल पद 15 58 मा यसो भन्छन्: “यसकारण हे मेरा प्रिय भाइहरू हो, दृढ होओ, दृढ होओ, र प्रभुको काममा सँधै बढो, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि तिमीहरूको काम व्यर्थ हुँदैन। प्रभुमा हुनुहुन्छ।
यसैले हामी अगाडि अगाडी काम गर्दैछौं पहिलो चेलाहरू भन्दा पहिले। येशूले तिनीहरूलाई जुन मिसन दिनुभयो त्यसबेला हामीलाई पनि लागू हुन्छ। हामीसंग सुसमाचार छ, प्रचार गर्ने सन्देश छ; र हामीलाई यो जनादेशमा जिउन पवित्र आत्माको शक्ति दिइएको छ। त्यसैले हामी अगाडि काम छ। हामीले येशूको आगमनको लागि नियालेर हावामा कुर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी हामीले पनि धर्मशास्त्रमा त्यो कहिले हुनेछ भनेर सुराग खोज्नु आवश्यक पर्दैन, किनकि बाइबलले यो स्पष्ट पार्छ कि यो हामीले थाहा पाउनु हुँदैन। बरु, हामीसँग उहाँ फर्कनुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गरेको छ, र त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त हुनुपर्छ। हाम्रो अगाडि काम भइरहेको छ, र प्रभुको काम गर्न हामीले यथासक्दो गर्नुपर्दछ किनकि हामीलाई थाहा छ कि यो काम व्यर्थ हुँदैन।